Leaf Springs, Truck Leaf Springs, Truck Cayrin - Dada
160 nooc oo gaadiidka, 600 oo noocyada kala duwan ee guga caleen, iyo sidoo kale sameyn karaa sida ay sawir macaamiisha ee.
Factory Price, Production Xasilloon, Custom Work, Tayada iyo Delivery Hubinta, Order Small Acceped
Wooden sariirtaada Ammaanka ee Xidhmada gaadiidka
Leaf baxaa, waayo, gaari xamuul ah
Quick Details meesha Asal ahaan: Shandong, Shiinaha Brand Name: DF damaanad: 180 Days OE NO .: The Nooca semi-trailer: TT, Cayrin Spring Car Model: BPW Wacan: Size Rear: 18 * 120 Samee Car: The semi-trailer model Number: The semi-trailer Spring Waxyaabaha: Steel Shoogga Absorber Type: Kartida kale Supply Supply Kartida: 10 ton / ton per Month Faa'iidooyinka Leaf Springs Isticmaalka ilo caleen baabuurta culus waa fiican at qaybiyo miisaanka si fiican u fidiyeen meeshii weyn, iyo in waa sababta ay Kuhelay yihiin ...
Place Detail Quick of Origin: Shandong, Shiinaha Brand Name: Dadaalloy damaanad: 3 Months OE NO .: TRA 2726 Type: TT, Cayrin Spring Car Model: Trailer JIRADA Wacan: Size Rear: Samee 20 * 75 Car: Truck Model Number: TRA 2726 TRA 2726: caleen guga Muhiimadda ilo Leaf Springs Leaf waa qayb muhiim ah oo habka ganaax gaariga ee. Waxay rakiban yihiin si ay caawimaad taageero miisaanka dhan ee gaariga ama gaari. ilo Leaf sidoo kale gargaar u ilaaliyaan xajin banjarin ee wadada iyo nidaamin ee ...
Dada Daawaha Co., Ltd. waa qof ku taqasustay ee qorshaynta iyo samaynta Leaf Sring, Cayrin Air, Farsamada joojinta. In ka badan 15 sano waayo-aragnimo. Waxaana lagu siinayaa waxyaabaha tayo sare leh si ay suuqa maxalliga ah iyo Europe, North America, South America, Bariga Dhexe, Afrika iwm